Sidee u dhacay howlgalkii Gaalkacyo ee Danab ay ku dileen sarkaalka sare? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Sidee u dhacay howlgalkii Gaalkacyo ee Danab ay ku dileen sarkaalka sare?
Saraakiisha ciidamada ammaanka gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland ayaa si wadajir ah uga warbixiyey howlgal maanta lagu dilay nin la sheegay in uu ahaa madaxii amniyaadka Al-Shabaab ee gobolka Mudug.
Howlgalka oo ka dhacay koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa fuliyey ciidamada Danab iyo kuwa PSF-ta Puntland, waxaana la sheegay in ninkaas uu dagaalamay inta aysan dilin ciidamadu.
Taliyaha qeybta booliska gobolka Mudug ee Puntland G/Sare Muumin Cabdi Shire ayaa sheegay in ninka la dilay uu watay qaraxyo iyo bastoolad, isla markaana uu ahaa madaxii Al-Shabaab u qabilsanaa dilalka iyo qaraxyada ka dhici jiray Gaalkacyo, isaga oo u mahad celiyay ciidamada ammaanka Puntland iyo Galmudug ee ka howlgala magaalada Gaalkacyo.
Sidoo kale taliyaha qeybta booliska Puntland ee gobolka Mudug ayaa sheegay in ciidamada booliska Galmudug ay maanta kadib fasax u heystaan in dhinaca Puntland ay kasoo qaban karaan qofkii ay u arkaan in uu amni darro ka wado magaaladan, isla markaana ay ku xiri karaan saldhigyadooda.
Dhankiisa Taliyaha qeybta booliska gobolka Mudug ee Galmudug oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in saraakiisha Puntland ay ku wada heshiiyeen in ciidamada labada dhinac ay isla howgalaan, si nabad loogu soo dabaalo magaalada Gaalkacyo.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ka socaday howlagallo ay si wadajir ah u sameynayeen ciidamada kumaandoosa Soomaaliya ee Danab qeybtooda gobolka Mudug, PSF-ta Puntland, booliska Galmudug iyo kan Puntland, waxaana tan iyo markii la bilaabay howlgalladaas meesha ka baxay falalkii amni darro ee ka dhici jiray magaalada Gaalkacyo.
Previous articleAbaabulka dibed bax weyn oo caawa laga dareemayo Muqdisho & Xog ku aadan
Next articleMaxaa ka jira in Gaafaadhi uu warqad is-casilaada u gudbiyey madaxweynaha?
Duqeyn Iyo Weerar Lagu Dilay Saraakiil Al-shabaab Ah oo Kadhacday G/Jubada Dhexe
Wasiir Maareeye oo looga yeeray Baarlamaanka kadib mooshin laga gudbiyay (Akhriso)
Gudoomiyaha ururka Midowga Afrika Moussa Faki oo Karaantiil ku jira & Xaladiisa oo halis ku jirta
Ciidamada Kenya oo dad shacab ah ku qasbay in ay ku dabaashaad bulaacado !!
Khilaafkii Ugu Xumaa oo kadhextaagan Dowlada Qadar Iyo Villa somaliya iyo hoose oo sheegaya in..
Baareyaal ka socda UK oo Somalia ka raadinaya nin Soomaali ah oo Axmed Faarax lagu magacaabo
XOG DHAGEYSO: MD Farmaajo oo Qaatay Go’aan Geesinimo leh Balse diiday ka hadalka labo arimood & Sababta
Nin Mindi ku weeraray dad marayay Buundada London oo toogasho lagu diley (Sawiro)
MD Deni oo amar culus dul dhigay golahiisa wasiirada oo kusaabsan in….